Smartfile: Whitelabel Yako Huru File Solution | Martech Zone
Chishanu, April 19, 2013 Svondo, October 4, 2015 John Hurley
Kunyangwe iwe urikutanga bhizinesi idzva, kana kuvhura chigadzirwa chitsva, mubvunzo wekutanga waunofanira kubvunza ndewokuti, "Ndiani musika wangu / mutengi"? Zvinonzwika zviri nyore, handiti? Ndisati ndasvika pachikamu chekuti isu takatadza kunyatsopindura mubvunzo iwoyo nemazvo, rega ndikupe yangu yemitongo miviri bhizinesi reti: SmartFile (Ndisu) ikambani yekugovana faira yakagadzirirwa bhizinesi. Isu tinopa mabhizinesi yakachengeteka, yakamisikidzwa nzira yekutumira nekutambira mafaira.
Patakatanga makore matatu apfuura, isu takatenda kuti vashandi veIT vanga vachisheedzera kushandisa chigadzirwa chedu. Isu taizoita kuti basa ravo rive nyore zvakanyanya nekuisa manejimendi evashandisi uye mafaera mumaoko evashandisi vavo. Mushure mekupedza zviuru zvemadhora, maawa asingaverengeki pamisika yekutengesa, Adwords, uye kunyangwe kutonhora, takaona kuti vashandi veIT vaive boka rekupedzisira revanhu vaida kutaura nesu… ndoda kutipa mari. Izvo isu zvataive tichinyanya kuvabvunza kuti vatore kutora chimwe chikamu chebasa ravo vachienda, uye zvakanyanya, kubvisa "kutonga" kwavo.
Kunyangwe zvedu faux pas, vanhu vachiri kusaina kuti vashandise chigadzirwa chedu. Sezvavaidaro, takatanga kuona kuti ava vaive vasiri vanhu veIT, asi vekutengesa nyanzvi mukati memasangano aya; nyanzvi dzekushambadzira kazhinji dzinoda kutumira mafaera mahombe kune waunoshanda naye kana munhu wekunze akakurisa kuti email igadziriswe. Kunyangwe vatengi ava vaive chikamu chevanhu vaviri bhizinesi kana kambani yeFortune 500, ivo vaiziva kukosha kwekuisa chiratidzo pazvinhu zvese zvebhizinesi ravo, kusanganisira yavo FTP server. Mushure mezvose, ivo vaive vekushambadzira nyanzvi! Uye ivo vaisada kuenda kuburikidza neyese red tape (kunetsekana) nedhipatimendi ravo remukati reIT kumisikidza nekutarisira yavo yavo FTP server. Ivo vaive pasi pe pfuti, sevanhu vazhinji vekutengesa vari, uye vaida mhinduro nekukurumidza kuzadzisa zvido zvavo. Saka vakaita zvatinoita isu tese kana tiine dambudziko: nyora mashoma mazwi akakosha muKutsvaga uye rega Google iigadzirise. Nekuda kwedu, isu takabuda ndokuvaudza kuti tinogona kuita kuti hupenyu hwavo huve nyore zvishoma.
Saka mubvunzo wandinowana kazhinji ndewekutiita kuti tisiyane pane Dropbox, Bhokisi kana Google Drive uye nei vashambadziri vehunyanzvi vachitisarudza isu pamusoro pavo? Ini ndichatanga neDropbox neGoogle Drive. Izvi zvigadzirwa zvikuru, uye zvakanakisa pane zvese, ivo vakasununguka! Vakuru vaviri vakasiyana pakati pavo, uye nesu zvakadaro, vari branding uye yakawanda-mushandisi kuwana. Chinhu chekupedzisira Dropbox neGoogle Drive zvave kuzorega iwe uchiita kuchinja logo yavo uye kuitsiva neyako, ndoda kukubvumidza kushandisa yako domain (mafaera.yourdomain.com). Kana uine hanya nemufananidzo wako wekambani zvakanyanya seni, izvi hazvishande. Kechipiri, zvigadzirwa izvi zvakagadzirirwa mushandisi mumwe chete. Mushandisi wega wega anofanirwa kuve neakaundi navo, uyezve unogona kugovana dura. Edza kutsanangura maitiro aya kune "layman"; chekupedzisira chinhu munhu wekushambadzira chaanoda kuita kuve technical technical.
NeBhokisi, iwe unowana akawanda-mushandisi kuwana, kuzivisa, uye kunyangwe kumaka, izvo zvinokutendera iwe kushandisa yako pachako logo uye color scheme; zvisinei, ivo havapi sarudzo yekushandisa yako wega domain.
Kukamurwa kukuru kune yega yeanopa aya saizi faira. Iyo huru faira yaunogona kurodha ndeye 2GB. Izvo zvinogona kurira kunge hombe faira, asi hazvina kukwana kurodha vhidhiyo kana inorema PowerPoint mharidzo. Ne SmartFile iwe unogona kurodha chero saizi faira kuburikidza chero browser. Kune zvakanyanya hunyanzvi savvy, isu tinopa yakazara FTP rutsigiro.
Saka kudzoka kuna ndiani mutengi wedu uye ndinovatengesa sei? Isu takaona kuti yakanga isiri yehunhu hwevakadzi, zera, bhizinesi, kana kunyangwe dhipatimendi, asi mhando yemunhu. Vanhu ava vanoshanda munyika yakabatikana uye vanobatwa pakati pekuiwana chaicho uye zvakanyanya kukosha kuitora nenguva. Kuuya kubva pakushambadzira kumashure ini ndaisakwanisa kufunga nezve mumwe munhu anokodzera rondedzero irinani kupfuura ini. Ndiani aiziva?
Tags: faira kutumirahombe fairahombe faira kuchinjisabmira
John ane anopfuura makore gumi nemana einternet software uye hutungamiriri ruzivo. Asati atanga SmartFile, John aive mutungamiri uye mubatsiri weWebexccellence, imwe yemakambani makuru ekuvandudza webhu muIndipolis. John akashanda nemakambani akadai saDelco Remy, Angie's Chinyorwa uye NCAA kugadzira hupfumi hwewebhu kunyorera. Zvakare achiri kushanda paWebexcellence, John akaita chinzvimbo chakakosha muchikamu chekutanga cheExpactTarget. Semutungamiri uye mubatsiri we SmartFile, John anotungamira kutengesa, kushambadzira, uye kusimudzira bhizinesi.
Goverana SeMufananidzo: Simbisa, Dzvanya uye Govana Chinyorwa chako
Zvese zvakanaka uye zvakanaka "kupa simba" vashandisi vako, asi iko kupihwa simba kunofanirwa kusanganisira-inodzivirirwa nedziviriro kuchengetedza yakanyanya bhizinesi data kubva mukukanganisa kana nemaune kudzimwa nekuti iyo data yaingochengetwa pamakore e cowboy, kunze kweIT uye hapana aitsigira iwo mafaera kumusoro, chero kupi. Izvo hazvityiswi nevashandisi vekupedzisira nehutongi nekuti isu tine imwe mhando ye "control freak" nyaya, asi nekuti isu takaona, kuburikidza neyakaipisisa, chaiyo-nyika inosangana huwandu hwe mayhem uyo mumwe "ane chinangwa" mushandisi "Ruzivo rwakaringana kuve nengozi" kuyedza kutiitira basa redu.
Ongorora backups? Hukuru. Shandura mabhaketi kunze kwekuchengetedzwa chero kupi chaiko nenyanzvi chaidzo? Zvichida, kuzviuraya kwebhizinesi. Iye anopa gore achaita zvavo "zvakanakisa" kukubatsira iwe, mukati memiganhu yebatsiro. Kana zvangova zvinobatsira kwavari kungorega data rako richienda "poof" zvinonyatsoita saizvozvo.